Ebu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otu esi esi ewu n'ọba ewu: nke nwere ike ime
Obi abụọ adịghị ya, ọnọdụ kachasị mkpa maka ịmepụta anụmanụ ọ bụla bụ ahụike, ọ ga-enwetakwa naanị site na mmezu nke isi ọnọdụ njide. Ọ bụrụ na ajụjụ a gbasara ịzụ ewu, mgbe ahụ, ọ dị mma ịmara na n'agbanyeghị ụdị ụlọ ị na-ewere, ọ bụrụ ọba, ụlọ anụ, ụlọ atụrụ, ma ọ bụ barn dị iche iche a wụrụ nke ọma, ihe bụ isi bụ na ebe a anaghị akpata ọrịa na ọnwụ.
Otu esi echekwa na otu esi enye nri ewu
Egwu bụ anụmanụ ndị na-adịghị mma maka usoro nhazi na ihe oriri, ma iwu kwesịrị ịdị na ihe niile. Ka anụ ahụ wee ghọta onwe ya n'ụzọ zuru ezu maka ịṅụ mmiri ara ehi, ewu kwesịrị ịdị mma n'ime ụlọ ebe ha bi. Ha kwesịkwara inwe nri kwesịrị ekwesị ka ahụ wee nwee ike ịmepụta nri ahụ maka ịhapụ ngwaahịa mmiri ara ehi.
Atụmatụ na aghụghọ maka novice ewu
Ewu - otu n'ime ebe kachasị mma anụ ọhịa. Egwuregwu na-agụnye anụ, mmiri ara ehi, ajị anụ, ala na skins. Ihe kachasị ewu bụ ewu ewu ha, n'ihi ya, ịzụlite ewu na ụlọ agaghị eme ka ị sie ike. Otu esi ahọrọ ewu A ga-achọ oke ewu niile nke oke ewu.
Ọrịa na-egbu egbu na peculiarities nke ọgwụgwọ ha
Aṅụ bụ anụ na-ewu ewu nke na-enye ogo dị elu, mmiri ara ehi dị mma. Ọ na-edoghị anya, na-emegharị nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla, na-eri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nri nile, na-achọta ihe oriri n'ụzọ dị mfe, na nlekọta na ọnọdụ kwesịrị ekwesị, anaghị akpata nsogbu. Ọgụ na-esighi ike, ma ọ dị mkpa ka ị mara otú ị ga-esi edozi ihe anụmanụ anaghị eme na otu esi emeso ya.
Ole mmiri ara ehi na-enye kwa ụbọchị
A na - azụlite ewu ewu na - emepụta anụ, mmiri ara, aji na akpụkpọ anụ. Ndị na-aga ịzụlite ewu bụ isi nwere mmasị na ajụjụ nke mmiri ara ehi nwere ike ịpụta maka oge ụfọdụ, nke na-amịpụtakwa ụzọ n'ime ihe ndị a. Ka anyị tụlee ya ọnụ. Ihe dị ka ụmụ anụmanụ niile si na anụ mammal, ewu nwere mmiri ara ehi na oge mgbe lambing, n'ihi na nzube ya bụ ịzụ ụmụ.
Ewu abụba: ihe bara uru, ihe na-emeso, esi agbaze
A na-ejikarị abụba abụba mee ihe na nri na n'usoro ntụziaka dị iche iche banyere nkà mmụta ọdịnala ruo ogologo oge. Mgbe e jiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ihe a na-enye aka na-enyere aka ịnagide ụkwara, ọrịa catarrhal, ọrịa na-egbuke egbuke, nsogbu anụ ahụ, wdg. Kedu ihe nwere ngwaahịa, na otu esi akwadebe ọgwụgwọ ọrịa, anyị tụlere n'isiokwu a.
Ndị nwe anụ ọkụ mgbe na-eme mkpesa na anụmanụ ahụ emeela ka mmiri belata mmiri ara ehi ma ọ bụ mmiri arahụ kpam kpam. Iji ghọta ihe mere ị ga-eji belata mmiri ara ehi, ọ dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ a na-edebe ewu, yana ihe na otu esi enye ha nri. Ma ọ dị mkpa na-atụ egwu na ịda nke milkiness Na otu ụbọchị a ewu adịghị enye mgbe niile otu mmiri ara ehi.
Egwu Mastitis: Na-akpata na Ọgwụgwọ Ọrịa
Idebe ewu n'ugbo ugbo bu ihe bara uru, ma obu nsogbu. Ụmụ anụmanụ chọrọ nlezianya na-elekọta, ebe ọ bụ na ụlọ obibi dara ogbenye na-akpalite ọdịdị nke ọrịa ehi, n'ihi na onye nwere ike ịdaba na uru na ọbụna anụ ụlọ. Otu n'ime ọrịa ndị a bụ udiri mastitis.
Ịgba Ọsọ: Ihe ịrịba ama na otu esi achọpụta ha
Mgbe a na-azụlite ụmụ ewu, usoro ahụ na-eme ka ọ dị mkpa. Iji mee ihe niile ziri ezi na n'oge, ị ga-enwe ike ịchọta mgbe ewu dị njikere maka ya. Ihe ịchụ nta bụ ịchụ nta; A na-akpọ usoro a esrus. Ụmụ anụmanụ dị iche iche nwere ya dị iche.
Ego ole ka ewu na-achọ maka oyi na otu esi esi kwadebe ya
Ubi ahihia maka ewu maka oyi bu oru siri ike ma na-ewe oge, ndu na ahuike nke anu ulo na otutu ugbo ga-adabere na mkpebi ya ziri ezi na oge. Ọrụ na blanks kwesịrị ịmalite na njedebe nke oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge okpomọkụ ma ghara ịhapụ ya ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ iji zere nsogbu na ọgba aghara.
Esi egbu na egbutu ewu
Azụ ewu n'ime ezinụlọ na-agụnye ọnyá ọzọ ha na igbutu. Idebe nkà na ụzụ zuru oke nke igbu anụmanụ ga-eme ka akpụkpọ anụ ya na aji ya kpuchie ya, ọ ga-enwe mmetụta dị mma n'ahụ anụ anụ. Otu esi egbutu ewu ma kesaa anu aru, ka anyi lee.
Ewu adịghị abịa ichu nta: ụzọ isi kpalite ịchụ nta
Isi ihe mere ndị ọrụ ugbo ji azụ ewu bụ ikike nke ụmụ anụmanụ iji mụọ nwa. Na nke a onye nwe ya kwesịrị ịma nke ọma otú nwanyị si akpa àgwà mgbe ọ na-abịa ịchụ nta. Ma, n'ezie, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nke a anaghị eme na ihe mere. Kedu mgbe ichu nta na-amalite? Ịbanye nwa ewu na-amalite site na ọnwa 7-9, ma a na-atụ aro ya mgbe nwanyị ruru 1.5 afọ.
Esi chọpụta afọ ime na nwa ewu
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-ewu ewu ọ bụghị nanị maka ịchọta mmiri ara ehi, kama ọ bụ maka ịzụ nwa, ya mere, a na-eme ka nwoke na nwanyi na-ahụ maka ọdịdị ewu. Iji chekwaa ahụ ike nke nwanyi na iji hụ na ụmụ a na-amụpụta, ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi lelee afọ ime nke anụmanụ ahụ, nwee ike ịkwado ma nyekwa ewu ahụ na ụmụ ọhụrụ.
Kedu ka ị ga - esi akpọ ewu?
Ọmụmụ nke ụmụaka n'ime ezinụlọ na-eme ka ọtụtụ mmetụta dị mma, na n'ọnọdụ a, ajụjụ nke ịhọrọ ntinye aha maka nwa ọhụrụ ahụ bilitere ozugbo. Ụmụ ewu na-ahụkarị ịzụ ọzụzụ, ha na-amata ndị nwe ha ma na-adọrọ mmasị na ha, n'ihi ya ịhọrọ aha maka ha kwesịrị ịbịaru nso.
Ọbara na mmiri ara ehi: akpata na ngwọta
A na-emekarị ewu ka ha wee nweta mmiri ara ehi, ebe ọ bụ na ọ na-edozi ahụ ma dị mma karịa ehi. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na a chọpụta adịghị ọcha na mmiri ara ehi, àgwà ya dị ntakịrị belata, ya na uru nke azụmahịa ahụ na-ebelata. Otu n'ime ihe na-adịghị emekarị na mmiri ara ehi bụ ọbara. Chọpụta ihe mere o ji egosi na otu esi egbochi ya.
Kedu ka esi eji aka gị mee ka onye na-eri nri ewu?
Ntu ewu ewu na-adabere na nri nri. Otu n'ime nzọụkwụ mbụ maka mmelite ụlọ maka ha bụ ngwá ọrụ nke ịzụ nri. Kedu ihe ndị a chọrọ maka atụmatụ maka nri na otu esi eme onwe gị, gụọ n'okpuru. Ntuziaka chọrọ maka feeders nke ụdị ọ bụla Ndị isi njiri na troughs ga-ezute bụ: nchekwa; mfe nke ojiji - onye nwe ya ga-enwe ike ịsacha ahụ na obere oge; onye na-eri nri kwesịrị ịnwe ngwaọrụ dị mfe, mgbe ị na-echebe ndepụta ahụ site n'ịgba.